Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Qalabka Dabaqa Musqusha Heer Caan Ah
2020 / 10 / 02 QoondayntaTilmaamaha qasabada 16388 0
Rakibida musqusha, qof kastaa wuxuu diirada saari karaa alaabada fayadhowrka ee waawayn, sida barkadaha iyo musqulaha. Xaqiiqdii, rakibidda qalabka qalabka sidoo kale waa mid aad muhiim u ah. Haddii rakibidu aysan meesha kujirin, way fududahay in la mirqaamo oo la xoqo, oo xitaa saameyn ku yeesho nadaafadda. Khabiirka hagaajinta guryaha ee soo socda Xiudada wuxuu soo koobayaa boosaska rakibida saxda ah ee qalabka qalabka musqusha ee caadiga ah si ay kaaga caawiyaan inaad tixraac sameyso.
1. Tuwaal shukumaan, tuwaal shukumaan ah
Qalabka guud ee tuwaalka lagu qubeysto iyo tuwaallada shukumaanka waxaa si fiican loogu rakibay isla dhinaca qubayska gacanta. Isla mar ahaantaana, dhibaatada biyaha aan lahayn ee shukumaanka dharka lagu beddelo waa in la tixgeliyaa.
Si loo rakibo barkadda qubeyska, ku rakib tuwaalka tuwaalka bannaanka qubeyska, guud ahaan dhererka rakibidda ayaa qiyaastii 1.8m ka sarreysa dhulka.
Rakib tuwaal gooni ah, biyuhu waa la iska indhatiri karaa. Laakiin fiiro gaar ah u yeelo nadaafadda, oo dhererka rakibidda goonida ah ayaa ka sarreysa dhulka 1.5m.
2. Dharka jillaab
Musqusha ayaa ka weyn, tixgeli inaad ku dhejiso albaabka musqusha gadaashiisa;
Musqusha way yar tahay waxayna ku rakiban tahay gidaarka bannaanka musqusha.
Dhererku guud ahaan waa 1.7m, iyadoo kuxiran dhererka qofkiiba.
3. hal koob haysta, laba koob haysta
Guud ahaan, waxaa lagu dhejiyaa darbiyada labada dhinac ee weelka lagu dhaqo, iyadoo la raacayo shelf shelf.
4. tuwaal warqad ah
Waxaa lagu rakibay dhinaca suuliga, oo ah mid si fudud loo gaari karo isla markaana aan muuqan, badanaa 0.6 mitir oo dhulka ka sarreeya.
5. Saabuun Net
Labada dhinac ee waaskada, waxay ku jirtaa saf ay ku jiraan qolka musqusha, kaas oo lagu dari karo hal koob oo haysta ama laba koob oo haysta;
sidoo kale waxaa lagu rakibi karaa gidaarka gudaha ee musqusha si loogu maydho si fudud.
6. istaag geeska
waxaa badanaa lagu rakibay mashiinka dharka, masaafada udhaxeysa shelf iyo mashiinka dharka waa 35cm;
sidoo kale waxaa lagu rakibi karaa geeska jikada si loogu dhigo dhadhan sida saliid iyo khamri.
7. burushka musqusha
waxaa lagu rakibay gidaarka suuliga gadaashiisa, salka koobka koobka burushka suulkuna wuxuu kudhowaad 10cm ka sarreeyaa dhulka.
Ardaaga hal lakab ah ayaa lagu rakibay korka weelka maydhashada iyo hoosta muraayadda musqusha, 30cm waxay ka sarreysaa weelka lagu dhaqo;
Khaanadaha laba-lakab ayaa badanaa lagu rakibay labada dhinac ee weelka lagu dhaqo.
Waxyaabaha kor ku xusan waxay tixgelinayaan booska rakibidda suunka musqusha ee dhinacyada nadaafadda, habboonaanta, biyuhu iyo quruxda, waxaan aaminsanahay inay ku habboon tahay qof walba inuu isticmaalo.
Hore:: Hagaha Rakibaadda Musqusha Musqusha Next: Sida Loo Xulo Qalabyada Maydhashada Cusub
2021 / 02 / 04 16838
2021 / 02 / 03 16448
2021 / 02 / 03 12455
2021 / 01 / 28 12222
2021 / 01 / 28 6848
2021 / 01 / 28 18415